api power company limited(api power company limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अपी पावरले फेरि रु. ५६.७० करोडको हकप्रद निष्कासन गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले फेरि १ः०.२९३८ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कम्पनीले हिजो फागुन ९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेस गर्दै हकप्रद निष्कासनको अनुमति मागेको हो। कम्पनीले कुल ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग गरेको छ। बोर्ड अनुमति दिएमा कम्पनीले ५६...
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २४५.७९ प्रतिशत बढाउन सफल भएको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको नाफा ४ करोड १४ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत्...
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन आज अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत कात्तिक १४ गतेदेखि सेयरधनीहरुका लागि १ः०.४७ को अनुपातमा प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयरधनीहरुका लागि निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले गत वर्ष फागुन १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद...
अपी पावरको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयरका अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि अपी पावरको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २६३ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि यो...
अपि पावरले डाक्यो एकैपटक दुई आ.व.को साधारणसभा, लाभांश पारित मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ। दुई आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्ने मुख्य प्रस्तावसहित अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनीले आउँदो मंसिर ८ गते काठमाण्डौको थापाथलीस्थित ट्रेड टावरमा रहेको प्रधान कार्यालयमा भर्चुअल माध्यम जुम एपबाट १६ औँ र १७ औँ वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको हो। सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को खुद मुनाफाबाट...
अपी पावरको हकप्रदमा आजबाट आवेदन खुल्यो
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले आज शुक्रबारदेखि ४७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले १ः०.४७ को अनुपातमा प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयरधनीहरुका लागि निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले गत वर्ष फागुन १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाएको थियो। कम्पनीले हकप्रद...
भोलिबाट अपी पावरको हकप्रदमा आवेदन खुल्ने, कहिलेसम्मका सेयरधनीले पाउने ?
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले भोलि (कात्तिक १४ गते) देखि ४७ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले १ः०.४७ को अनुपातमा प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद सेयरधनीहरुका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले गत वर्ष फागुन १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद निष्कासनको अनुमति पाएको...
अपी पावरको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति?
काठमाण्डौ । बोनस र हकप्रद सेयरका लागि अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ४६.७६५ प्रतिशत हकप्रद सेयरका लागि हिजो शनिबार अपी पावरको शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ११४.५० रुपैयाँ कायम भएको छ। कम्पनीले यही चैत ७ गते...
अपी पावरको २००% हकप्रदलाई कमजोर रेटिङ
काठमाण्डौ । अपी पावर कम्पनी लिमीटेडले प्रस्ताव गरेको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयरलाई इक्रा नेपालले औसत भन्दा कमजोर आधार जनाउने ग्रेड फोरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले अपी पावरले जारी गर्न लागेको रु. २ अर्ब २६ करोड ८० लाखको हकप्रद निश्कासनलाई औसत भन्दा तल आधारहरु जनाउने ग्रेड दिएको हो । इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट स्केलमा ग्रेडिङ्ग...